बेरुजु विवाद बल्झिँदा इन्टरनेट काटिने जोखिम- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
ट्वीटरमा के गर्न खोज्दै छन् इलन मस्क ?
मस्कले ट्वीटरको बृहत् सम्भावना उजागर गर्ने बताउँदै आएका छन्, इतिहास साक्षी छ, उनले हात हालेका जुनसुकै कम्पनी सफल छन्
वैशाख १४, २०७९ सजना बराल
काठमाडौँ — बारम्बार विवादित ट्वीट गर्दै आएका विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति इलन मस्कले अन्ततः ट्वीटर नै किनेका छन् । तर पैसा कमाउन नभई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि किनेको उनको दाबी छ । विज्ञहरूले भने उनको अभिव्यक्ति पत्याइरहेका छैनन् ।
मस्कले आफ्ना कम्पनीहरू टेस्ला र स्पेस एक्समा झैं ट्वीटरबाट मनग्य पैसा कमाउने उद्देश्य राखेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ । त्यसो हुँदैनथ्यो भने उनले ४४ बिलियन डलर (करिब ५४ खर्ब रुपैयाँ) किन लगानी गर्थे होलान् !
अब ट्वीटरबाट कसरी पैसा कमाउने ? अमेरिकी पत्रकार पिटर काफ्काले आम्दानीका उपायबारे भक्स मिडियामा सुझाव पेस गरेका छन् । काफ्का लेख्छन्, ‘मस्कले ट्वीटर किन्न केही पैसा बैंकबाट ऋण लिएका छन्, जुन उनले तिर्नुपर्छ । केही ऋण टेस्लाको सेयरसँग पनि जोडिएको छ । टेस्लाको सेयर अत्यन्तै अस्थिर छ ।’ यसर्थ, गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा ट्वीटर चलाउनु मस्कका लागि सम्भव नभएको काफ्काले उल्लेख गरेका छन् । तर, व्यवसायका रूपमा ट्वीटरको मुख्य समस्या– प्रयोगकर्ताका लागि निःशुल्क छ । यद्यपि ट्वीटरमा विज्ञापन पनि कम छैन ।
फेसबुक र गुगलसरह ट्वीटरका उल्लेख्य प्रयोगकर्ता छैनन् । मस्कले भने ट्वीटरको ‘बृहत् सम्भावना’ उजागर गर्ने बताउँदै आएका छन् । उनको जुन प्रकारको पृष्ठभूमि छ वा जसरी उनले अनलाइन भुक्तानी प्रणाली, विद्युतीय सवारीसाधन, रकेट कम्पनी, न्युरो टेक्नोलोजीलगायतलाई असाध्यै लोकप्रिय र आर्थिक रूपमा सबल बनाए, उनका कुरामा विश्वास गर्ने आधार देखिन्छ । इलनले हात हालेका जुन कुनै कम्पनी सफल भएका छन् । कतिसम्म भने हिजोआज त उनको एक ट्वीटले नै बजारमा उथलपुथल निम्त्याउने गरेको छ ।
ट्वीटर किनेर सेयर मूल्य ह्वात्तै बढेपछि यसलाई बेच्ने मस्कको रणनीति हुन सक्ने एकथरीको अनुमान छ । उनले यसअघि पनि कम्पनीहरू बेचेर राम्रो नाफा हात पारेका थिए । ५० वर्षअघि दक्षिण अफ्रिकामा जन्मिएका मस्कले सन् १९९९ मा अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम पेपाल स्थापना गरेका थिए । सन् २००२ मा उनले १.५ अर्ब डलरमा पेपाल इबे कम्पनीलाई बेचे । यसबाट उनलाई १८ करोड डलर फाइदा भएको टाइम म्यागजिनको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
त्यसपछि इलनले स्पेस एक्स नामक रकेट कम्पनी स्थापना गरे । यसले नासासँग मिलेर अन्तरिक्षका मिसनहरूमा काम गर्छ । मंगल ग्रहमा उपनिवेश खडा गर्ने इलनको लक्ष्य छ । उनी मान्छेको टाउकोभित्र कम्प्युटर जडान गर्ने परियोजनामा पनि काम गरिरहेका छन् ।
न्युरोलिंक नामक उनको कम्पनीले मानिसको खोपडीमा माइक्रोचिप्स जडान गर्ने र रोबर्टद्वारा मस्तिष्कको सर्जरी गर्ने प्रणाली निर्माणको काम गरिरहेको छ ।
आफूहरूले मानव मस्तिष्क र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको सहअस्तित्व विकास गर्न खोजेको मस्क बताउने गर्छन् । न्युरोलिंकलाई उनको अनौठो र भविष्यवादी (फ्युचरिस्टिक) कम्पनीका रूपमा लिइन्छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालयकी इतिहासविद् जिल लेपोरेले ‘दि इभनिङ रकेट’ नामक आफ्नो पडकास्टमा मस्कलाई साइन्स फिक्सनमा आधारित चरम पुँजीवादका प्रतिनिधि पात्रका रूपमा अर्थ्याएकी छन् । अन्तरिक्ष कब्जा गर्नुका साथै मानवताको रक्षा गर्ने जस्ता अजीव योजना बनाउने मस्कको पारालाई उनी ‘मस्किजम’ को संज्ञा दिन्छिन् । उनको परिभाषामा मस्किजम भनेको टेक्नो–युटोपियनिजम (प्रविधिसँग सम्बन्धित आदर्शवाद) हो, जुन असाध्यै आकर्षक र उत्तिकै खतरनाक छ ।
आफ्ना महत्त्वाकांक्षी परियोजनाहरूबाहेक मस्क इन्टरनेटलाई ध्रुवीकरण गर्ने व्यक्तिका रूपमा पनि परिचित रहेको यूएसए टुडेको समाचारमा भनिएको छ । ६ सन्तानका पिता उनी ट्वीटरमा खुब चर्चित छन् । यहाँ उनी राजनीति र व्यवसायहरूबारे खुलेर अभिव्यक्ति दिन्छन् । इन्टरनेटको मिम कल्चरलाई उनले आत्मसात् गरेका छन् । उनका केही ट्वीटले कानुनी उल्झनसमेत निम्त्याएका छन् । आफ्ना प्रशंसकसँग बोल्न र जोडिन उनी ट्वीटर प्रयोग गर्छन्, यसलाई उनले मूलतः मनोरञ्जनको माध्यम बनाएको देखिन्छ ।
ट्वीटरका सहसंस्थापक एवं पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्याक डोर्सेले मस्कलाई ट्वीटरका आइडल युजर (आदर्श प्रयोगकर्ता) भन्ने गरेका थिए । डोर्सेका अनुसार मस्कले जुन तरिकाले ट्वीटर प्रयोग गर्छन्, यो वास्तवमा त्यसरी नै प्रयोग गरियोस् भन्ने हेतुले विकास गरिएको थियो । डोर्से र मस्क मिल्ने साथी पनि हुन् । मस्कका धेरैजसो ट्वीट ठट्टा, ट्रोल वा वाहियात चुट्किलाका रूपमा आउँछन् । अन्टसन्ट ट्वीट, अभिव्यक्ति र व्यवहारलाई लिएर कतिपय सूचना प्रविधिविज्ञहरूले उनलाई एक ‘वयस्क बच्चा’ भन्छन् । तसर्थ केही दिनअघि मस्कले ट्वीटर किन्न चाहेको कुरा ट्वीट गर्दा कतिपयले उनी ‘यस विषयमा गम्भीर छैनन्, पहिलेझैं ठट्टा मात्रै गरेका हुन्’ भनेका थिए ।
तर उनले केही समयअघिदेखि नै ट्वीटरको सेयर किन्दै आएको र पछिल्लो समय आफूसँग सबैभन्दा धेरै ९.२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको खुलासा गरे । त्यसपछि ट्वीटरले उनलाई व्यवस्थापन बोर्डमा आउन आग्रह गरेको थियो । सुरुमा उनले मानेका थिए । तर पछि बोर्ड सदस्य बन्दिनँ भने । त्यसको केही दिनपछि उनले ५४.२० डलर प्रतिकित्ता मूल्यमा ट्वीटरको सबै स्वामित्व खरिद गर्न चाहेको बताए । ट्वीटरले यस विषयमा विचार गर्ने बताउँदै आएको थियो ।
सोमबार भने ट्वीटरको बोर्ड समितिले इलनलाई कम्पनी बेच्ने निर्णय गरेको जानकारी दियो । खरिद प्रक्रिया टुंगिएपछि ट्वीटर अब निजी रूपमा सञ्चालित कम्पनी बन्नेछ । यसको प्रभाव ठूलो भए पनि व्यापार सानो भएकाले इलनले यसलाई कसरी अघि बढाउँछन् वा कस्तो आकार दिनेछन् भन्नेमा संसारभर चासो छ । सन् २००६ मा स्थापना भएदेखि नै ट्वीटर सधैं खराब व्यवस्थापकको हातमा परेको जानकारहरूको भनाइ छ ।
सन् २००८ को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा बाराक ओबामा र जोन म्याककेनले आफ्ना चुनावी अभियानमा ट्वीटर प्रयोग गरेका थिए । त्यसपछि यसको लोकप्रियता बढ्यो । त्योभन्दा अघि ट्वीटरलाई सोसल नेटवर्किङको पनि चरित्र भएको निःशुल्क एमएसएस पठाउन मिल्ने एउटा माध्यमका रूपमा मात्रै लिइन्थ्यो । विज्ञापन र ग्राहक सदस्यता बढाउन ट्वीटरले कहिले पनि स्पष्ट ‘रेभेन्यु मोडल’ बनाउन नसकेको भन्दै यसको आलोचना हुने गरेको छ । प्रविधि र व्यापारलाई एकसाथ माथि उठाउन सक्ने इलनको जिम्मामा आएपछि अब आर्थिक रूपमा ट्वीटरको दिन सप्रिने अनुमान गरिएको छ ।
तर इलनले साझा गर्दै आएका ट्वीटरसम्बन्धी योजनाले प्रयोगकर्तालाई भने अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । इलनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा ट्वीटरका विधान खुकुलो पार्ने अनुमान गरिएको छ । यसले उत्पीडक, ट्रोल र दुर्व्यवहार गर्नेलाई प्रश्रय दिने उनीहरूको डर छ । अमेरिकी सांसद एलिजाबेथ वारेनले मस्कले ट्वीटर किन्नु ‘लोकतन्त्रका लागि खतरनाक’ भएको बताएकी छन् ।
खर्बपति मस्कको जिम्मामा ट्वीटर आएपछि अब उनले डोनाल्ड ट्रम्प जस्ता दक्षिणपन्थी नेता एवं समर्थकलाई स्थान दिन सक्नेतर्फ पनि विज्ञले औंल्याएका छन् । गत जनवरीमा अमेरिकी संसद्मा दंगा निम्त्याउन प्रोत्साहन गरेको भन्दै
ट्वीटरले ट्रम्पलाई आफ्ना प्लाटफर्ममा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसमा आपत्तिजनक नै भए पनि कानुनी रूपमा गलत नभएका पोस्ट हटाउन नहुने, प्रतिबन्ध लगाउन नहुने मस्क बताउँछन् । उनले बटद्वारा सञ्चालित फेक एकाउन्ट छाँट्ने जस्ता राम्रा योजनाबारे पनि बोलेका थिए, यसको समर्थन गर्ने गरिएको छ ।
मस्कले ट्वीटर किन्नु विशुद्ध बिजनेस डिल (व्यापारिक कारोबार) भएको भक्स मिडियाकी उपसम्पादक लिज जोपाटोले ‘टुडे एक्स्प्लेन्ड’ पडकास्टमा बताएकी छन् । ‘यो नै सभ्यताको अन्त्य होइन । रुस, युक्रेनमा के भइरहेको छ, हामीले त्यतातिर बढी ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनी भन्छिन्, ‘ट्वीटर कसको स्वामित्वमा छ भन्नेमा नअल्झिऔं ।’
प्रकाशित : वैशाख १४, २०७९ ०६:३४